कसका लागि कसले बनाउने कानुन ? - Jhilko
माक्र्सवादी अध्येता एवम् कम्युनिष्ट नेता घनश्याम भुसालले गत हप्ता एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– कम शासन गर्ने शासक, असल शासक हुन ।
शासक शब्दको राजनैतिक अर्थ र प्रयोगको ऐतिहासिकताबारे बुझेर नै नेता भुसालले यसो भनेको हुनुपर्छ । अथवा, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टी एकताका बेला गरिएको भद्र सहमति सम्झाउनका लागि यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । त्यसतर्फ म प्रवेश गर्दिन ।
तर, शासक शब्दले भने कता–कता झस्काउँछ । शासकीय स्वरूप र परिवर्तित परिस्थितिबारे सर्वसाधारणजस्तै म पनि शशंकित छु । आखिर, किन एकाएक ‘कम वा बढी शासन’ को प्रसङ्ग ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो त ?
नेता घनश्याम भुसालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हप्ता दिनपछि नै संसदमा उभिएर कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले भनिदिए– कानुन निर्माण प्रक्रियामा भित्रै बढी छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा भित्रै भन्नाले मन्त्री, मन्त्रालय, संसदीय समिति वा संसद नै होला । तर, कानुन निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक बहसका लागि कम लैजाने तयारी किन गरिदैछ ? सायद यसको जवाफ पनि कानुन मन्त्री ढकालले दिनु नै हुनेछ । मैले यो आलेखमार्फत् प्रश्न मात्रै उठाउन सक्छु अथवा सम्भावित कारणको खोजी गर्न सक्छु ।
मलाई लाग्छ, थोरै निकट विगतको पृष्ठभूमिका कारण कानुन मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ । संसदलाई जानकारी गराइएको हुनसक्छ । हुन पनि, सरकार एकपछि अर्को विधेयकमा विवादित बन्दै आएको छ । त्यसैबाट सतर्क हुँदै यस्तो चलाखीपूर्ण चतु¥याइको तयारी भइरहेको हुनसक्ने अनुमान सत्य पनि हुनसक्छ ।
फेरि प्रश्न उठ्छ, यो बाटो ठीक हो त ?
यदि, यो बाटो र विधि ठीक मान्ने हो भने त कानुन नै कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
थोरै मानिसको सहभागितामा, विशेषगरी शासकीय नेतृत्वको चाहनाबाट मात्रै कानुन निर्माण गर्ने तयारी हो भने त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
फर्कौ– शासकको प्रसङ्गतर्फ नै ।
नेकपा नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको सरकारलाई लागेको सवैभन्दा ठूलो आरोप शासकत्वसँग जोडिएको विषय नै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र शैली, उनका विभागीय मन्त्री र सल्लाहकारहरुको आचरण अनि काम गर्ने तौरतरिकाप्रति स्वयम् नेकपा पङ्क्तिबाटै प्रश्न उठ्न थालेको तथ्य छिप्न सकेको छैन ।
कहिले अरिङ्गाल, कहिले माहुरी त कहिले सिपाही बन्न कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई जति निर्देशन दिए पनि सरकार आरोपमुक्त बन्न सकेको छैन । सरकारबाट सम्पादित राम्रा काम प्रधानमन्त्री ओली, विभागीय मन्त्री र सल्लाहकारहरुको नियतसँग जोडेर चित्रित पात्रताको कायाँले पूरै छोपिदिएको छ । सरकारप्रति सर्वसाधारणको धारणा तीब्रतर गतिमा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अत्यन्तै दुःखद हो । किनभने, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अहिलेजस्तो ऐतिहासिक अवसर कहिल्यै पाएको थिएन । त्यसैले, तथ्य छिपाएर होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षामार्फत् जनताको मन जित्नु बाहेक अर्को विकल्प नै यो सरकारसँग छैन ।
जति ‘छैन र होइन’ भने पनि वर्तमान नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेकै छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, विगतका संघर्षको जनादेश र संविधानको कार्यभार भुलेर कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको सरकारका नेतृत्वकर्ता शासकीय सलामी, तक्मा मोह, चाकडीको आसक्ति र तिनबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा ‘शासक’ बनेको भूत बेस्सरी सवार छ । राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्ममा आसेपासे र चाकडी गर्नेहरुको भीड लागोस् भन्ने रहर छ । त्यसैले स्वयम् नेकपा पङ्क्तिदेखि सर्वसाधारणसमेतले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको छ ।
खालि प्रतिपक्षी दलले मात्रै प्रश्न गरेको होइन । नेपालको प्रतिपक्षी दल त वास्तवमा प्रतिपक्षी नै होइन । किनभने, संसदीय प्रक्रियालाई गणितीय अवरोध गर्न नसक्ने दललाई प्रतिपक्षी मानिदैन । संसदीय अभ्यास मान्ने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रतिपक्षी बन्न निश्चित प्रतिशत सिट ल्याउनुपर्छ ।
हाम्रोमा प्रतिपक्षीका लागि मापदण्ड नै छैन । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन जुन प्रावधान गरिएको छ, नेपाली काँग्रेस त्यो हैसियतमा नभएकाले संविधानले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिपक्षी नै मानेको छैन । बस्, प्रतिपक्षीको सेवासुविधा नरोकिएको मात्रै हो ।
त्यसैले प्रश्नसँग सरकार डराउनु हुन्न । बरू प्रश्न किन उठे ? सोंच्नुपर्छ । जनवादी सरकार परम्परागत शासकजस्तो होइन । प्रश्न उठ्छन् । उठाउने अधिकार हामीले सम्वैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिसकेका छौं ।
जहाँ बढी प्रश्न उठेको छ । उनीहरुलाई गाली गर्ने होइन, स्वयम् जवाफ खोज्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । जस्तो– कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता नै गणतन्त्रको निष्कर्ष हो । नडराई कानुन निर्माणका विषय सार्वजनिक बहसका लागि खुल्ला गरिदिए आम स्वीकार्यता नै बढ्छ । खराबहरुले हजार प्रयास गरे पनि सम्विधानको मार्गनिर्देशन विपरीत कानुन बन्ने सम्भावना कमै हुन्छन । नेतृत्वमा बस्नेहरुले शासकका रुपमा होइन, सेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने मनोविज्ञान बनाए भने गालीको ठाउँमा प्रशंशा ओइरिन्छन् । परिवर्तनको आभास तत्काल सुरु हुन्छ ।
अन्त्यमा, क्रिकेटमा पार्टटाइम बलरले कहिलेकहीं एकदमै राम्रो इकोनोमी बनाउँछ । तर, पार्टटाइम बलर मात्रै जीतका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । खराब प्रदर्शनका बाबजुद पनि बलरको विकल्प बलर नै हो । जीतका लागि महत्वपूर्ण कुरा सामूहिक प्रयास हो । एक्लै चम्केर गणतान्त्रिक प्रणाली चल्दैन । त्यो राजतन्त्र अथवा अरु केही हो । जनवादी गणतन्त्रका लागि जनता नै चम्किनुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
कफि गफमै सिमित भएको हो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ...
बुधबार राति राजधानीमा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक कफि गफमा...
कुनै बेला यो मुद्धा अदालतमा पुग्यो भने आफ्नो अनुकूल फैसला गराउनु पर्छ भन्ने दुरदर्शी...